Tag: waraaqo cadcad | Martech Zone
Tag: waraaqo cadcad
Sabtida, Diisambar 19, 2020 Sabtida, Diisambar 19, 2020 Madhavi Vaidya
Waxyaabaha loo yaqaan 'Gated content' waa istiraatiijiyad ay adeegsadaan shirkado badan oo B2B ah si ay u siiyaan waxyaabo wanaagsan oo macno leh si ay u helaan hoggaamiyeyaal wanaagsan oo is dhaafsi ah. Siinta tooska looheli karo si toos ah lamaheli karo oo qofku wuuheli karaa kadib markuu isweydaarsado macluumaad muhiim ah. 80% hantida suuqgeynta B2B waa dahaadh; maaddaama waxyaabaha ku jira albaabku ay istiraatiijiyad u leeyihiin shirkadaha jiilka hoggaaminaya ee B2B. Hubspot Waa muhiim in la ogaado ahmiyadda ay leedahay waxyaabaha ku jira albaabka haddii aad tahay shirkad B2B iyo wixii la mid ah
Sabtida, Oktoobar 31, 2015 Douglas Karr
Waan ku riyaaqay sawirradan ka socda JBH iyo sheekada iyo sawirrada ay soo saarto markaad ka fikirto waxyaabaha ku jira. 77% suuqleyda ayaa hadda adeegsada suuqgeynta waxyaabaha iyo 69% magacyadu waxay abuuraan waxyaabo ka badan intii ay sameeyeen sanad ka hor. Iyo sida qof waliba u leeyahay dhadhankiisa is biirsaday ee ay jecel yihiin, waxaa muhiim ah in la xasuusto in dhagaystayaashaadu ay kala duwan yihiin - inbadanna waxay ku raaxaystaan ​​noocyada qaar ka kooban kuwa kale. Si lagaaga caawiyo inaad horumariso suuqgeynta waxyaabahaaga
Kama yaabi karno natiijooyinka Warbixinta Suuq-geynta Macluumaadka 2015. Waxaan u wareejinay ku dhowaad dhammaan diiradeena kordhinta saamiga suuqa, wacyigelinta sumcadda iyo ku-habboonaynta beddelaadda maamulka mawduucyada aan u horumarinayno macaamiisheenna. Foomamka Mawduuca Sare ee Suuqgeynta B2B waa: Daraasado Xaalad - Marka laga reebo kor u qaadista sumaddaada, daraasad kiis waxay bixisaa habab wax ku ool ah oo looga sheekeysto sheeko ku saabsan macaamiil kaas oo iska diiwaangelin doona rajooyinka kale